आज चन्द्रमा मकर राशिमा, कतिबेला कुन दिशाको यात्रा शुभ रहला? जान्नुहाेस्! – Ramailo Sandesh
आज चन्द्रमा मकर राशिमा छन् । त्यसैले दक्षिण र पूर्व बाहेक अन्य दिशाको यात्रा शुभ छैन । आज मंगलबार परेकाले उत्तर दिशाको यात्रा गर्दै नगर्नुहोला । यदि बाध्यता नै छ भने धार्मिक उपाय अपनाएर मात्र यात्रा गर्नुहोला । शुभ बेलामा अमला वा सक्खर खाएर यात्रा प्रारम्भ गर्नुुहोला । साथै पुरुषको नेतृत्वमा उत्तर पूर्व तथा स्त्रीको नेतृत्वमा वायव्य अर्थात उत्तर पश्चिम र ईशान अर्थात उत्तर पूर्व दिशाको यात्रा गर्दा राम्रो हुनेछ । यदि तपाइँ विशेष यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने शुभ दिशामा मात्रै गर्नुपर्दछ ।
आजको शुभ लाभादि बेला बिहान ५:५७ बजेदेखि ७:३० बजेसम्म लाभ बेला, बिहान ७:३० बजेदेखि ९:०३ बजेसम्म अमृत बेला, बिहान ९:०३ बजेदेखि १०:३५ बजेसम्म काल बेला, बिहान १०:३५ बजेदेखि १२:०८ बजेसम्म शुभ बेला, बिहान १२:०८ बजेदेखि १:४१ बजेसम्म रोग बेला, दिनमा १:४१ बजेदेखि ३:१४ बजेसम्म उद्धेग बेला, दिनमा ३:१४ बजेदेखि ४:४६ बजेसम्म चर बेला, दिउँसो ४:४६ बजेदेखि ५:१९ बजेसम्म लाभ बेला